မူးယစ်ဆေးစွဲ၌ orbitofrontal cortex ၏အခန်းကဏ္:: preclinical လေ့လာမှုများပြန်လည်သုံးသပ် (2008) - သင့် ဦး နှောက်အပေါ်
မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် orbitofrontal cortex ၏အခန်းကဏ္ဍကို: preclinical လေ့လာမှုများ၏သုံးသပ်ချက် (2008)
Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008 ဖေဖော်ဝါရီလ 1; 63(3): 256-262 ။ 2007 သြဂုတ်လ 23 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2007.06.003
ဂျက်ဖရီ Schoenbaum1,2 နှင့် Yavin Shaham3
ဦးနှောက်ပုံရိပ်နည်းလမ်းများ အသုံးပြု. လေ့လာမှုများ orbitofrontal cortex အတွက်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု, ဖွယ်ရှိရလဒ်များသို့မဟုတ်အကျိုးဆက်များအရသိရသည်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမြှင့်တင်ရန်ထင်နေတဲ့ဦးနှောက်ဧရိယာ, မူးယစ်ဆေးစွဲများတွင်ပြောင်းလဲကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားလူ့ပုံရိပ်တွေ့ရှိချက် compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး relapse တူသောစွဲ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များ orbitofrontal function ကိုမူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများကိုအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ကမကထပြုခဲ့သောအယူအဆမှဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ orbitofrontal-mediated သင်ယူမှုလုပ်ငန်းများကိုပေါ်နှင့် orbitofrontal cortex အတွက်အာရုံခံဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်ကြွက်များနှင့်မျောက်များကို အသုံးပြု. ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများကနေရလဒ်တွေကိုဆွေးနွေးပါ။ ငါတို့သည်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါး Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် relapse အတွက် orbitofrontal cortex ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်လေ့လာမှုများကနေရလဒ်တွေကိုဆွေးနွေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကနိဂုံးချုပ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ orbitofrontal-မှီခိုသင်ယူမှုလုပ်ငန်းများကိုချို့ယွင်းခြင်းနှင့်, orbitofrontal cortex တွင်ဤအပြောင်းအလဲများကို compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်ကစား relapse သေးထူထောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေအတိအကျအခန်းကဏ္ဍအာရုံခံလှုပ်ရှားမှုပွောငျးလဲကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသက်သေအထောက်အထားရှိစဉ်အခါဖြစ်ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးစွဲ compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု 1-3 မှ relapse မြင့်မားကြိမ်နှုန်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာမူးယစ်ဆေးစွဲအပေါ်အခြေခံသုတေသနမူးယစ်ဆေးဝါးများ4၏စူးရှသောအကြိုးသက်ရောက်မှုအခြေခံသည့်ယန္တယားကိုနားလည်ရန်အကြီးအကျယ်ကျိန် ဆို. ပူဇော်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသုတေသန mesolimbic dopamine စနစ်နှင့်၎င်း၏ efferent နှင့် afferent ဆက်သွယ်မှုအလွဲသုံးစားမှု 4-7 ၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အာရုံကြောအလွှာကြောင်းဖော်ပြသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်မည်သို့ပင်ပါကမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စူးရှသောအကြိုးသက်ရောက်မှုကြာရှည် abstinence 8-10 နှင့်အလွန်အကျွံနှင့် compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှထိန်းချုပ်ထားသောမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုကနေအကူးအပြောင်းတွင်အောက်ပါမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှ relapse အပါအဝင်စွဲအတော်ကြာအဓိကအင်္ဂါရပ်များ, များအတွက်အကောင့်မပေးနိုငျကွောငျးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည် 11-14 ။
သက်သေအထောက်အထားများအများအပြားလိုင်းများပေါ်အခြေခံပြီးကအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောမူးယစ်ဆေး-ရှာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး relapse အဆိုပါ orbitofrontal cortex (OFC) 14-18 အတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများကိုအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ကမကထပြုခဲ့ကြောင်းတွေးဆခဲ့သည်။ OFC အတွက် Hypermetabolic လှုပ်ရှားမှု obsessive compulsive မမှန်များ၏ etiology အတွက် (OCD) 19-22 ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရလျက်ရှိသည်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် OCD ၏ဖြစ်ပွားမှုအထွေထွေလူဦးရေ 23-25 အတွက်နှုန်းထက်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ ကိုကင်း 26 အတွက် imaging လေ့လာမှုများ; 27, စိတ်ကြွဆေး 28; 29 နှင့်ဘိန်းဖြူ 15 အသုံးပြုသူများ OFC အတွက်ပြောင်းလဲဇီဝြဖစ်ထုတ်ဖေါ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆက်စပ်တွေကို 15 တုံ့ပြန်အာရုံခံ activation တိုးတက်သဖြင့်, 30 ။ ဒါကြောင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်အပြောင်းအလဲများတိုးမြှင်သို့မဟုတ်အာရုံကြော function ကိုနှောင့်အယှက်, OCD လူနာများနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပြောင်းလဲအာရုံခံအချက်ပြဖွယ်ရှိ afferent ဒေသများဆီက input ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောပေါင်းစည်းမှုထင်ဟပ်ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းရှိမရှိသိရန်ခက်ခဲသည်ပေမယ့်။ ဒီထင်ကြေးတွေနဲ့ကိုက်ညီ, မူးယစ်ဆေးစွဲ, OFC ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု 31 နှင့်အတူလူနာလိုပဲကို 'လောင်းကစားဝိုင်း' 'တာဝန် 32-34 အတော်ကြာမျိုးကွဲအတွက်သင့်လျော်စွာတုံ့ပြန်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ ဤဆင်းရဲသောစွမ်းဆောင်ရည် OFC 35 ၏ပုံမှန်မဟုတ်သော activation ဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ ဤအလက်တွေ့လေ့လာမှုများကနေရလဒ်တွေကို OFC function ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲအတွက်အာရုံချို့ယွင်းတာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အရေးကြီးတာကသည်ဤဒေတာ OFC function ကိုပြောင်းလဲမှုများမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးစွဲဖို့တစ်ဦးချင်းစီ predispose တဲ့ Pre-ရှိပြီးသားအခွအေနေကိုကိုယ်စားပြုနေကြသည်ရှိမရှိခွဲခြားမရစေနိုင်ပါဘူး။ ညွှန်ပြ ဤပြဿနာကိုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများအတွက်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတှငျကြှနျုပျတို့ပထမဦးဆုံးအမူအကျင့်လမ်းညွှန်အတွက် OFC ၏ putative function ကိုဆွေးနွေးပါ။ ကျနော်တို့ထို့နောက် OFC-mediated အပြုအမူတွေအပေါ်နှင့် OFC အတွက်အာရုံခံဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများကနေသက်သေအထောက်အထားဆွေးနွေးပါ။ ကျနော်တို့ထို့နောက်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်မူးယစ်ဆေး relapse အတွက် OFC ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်ကန့်သတ်စာပေဆွေးနွေးပါ။ ကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့ OFC အတွက်အာရုံခံဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာတည်မြဲပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့် OFC-မှီခိုအပြုအမူတွေချို့ယွင်းဤအပြောင်းအလဲများကို compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်ကစား relapse သေးထူထောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေအတိအကျအခန်းကဏ္ဍကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသက်သေအထောက်အထားရှိစဉ်အခါကောက်ချက်ချ။ စားပွဲတင် 1 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ (စာသားထဲမှာစာလုံးစောင်းစာလုံး) တွင်အသုံးပြုသောအသုံးအနှုန်းများတစ်ခက်ဆစ်အဘိဓာန်ပေးပါသည်။
အပြုအမူလမ်းညွှန်အတွက် OFC ၏အခန်းက္ပ
အမြင်ကျယ်စကားပြော, အပြုအမူကြောင့်ရလဒ်ကို၏တန်ဖိုး၏တက်ကြွသောကိုယ်စားပြုမှုကပါဝငျသောအထူးသဖြင့်ရလဒ်ကို, ရယူလိုတဲ့ဆန္ဒအသုံးပြုပုံသို့မဟုတ်မသက်ဆိုင်တန်ဖိုးကိုသို့မဟုတ်လိုလား (သို့မဟုတ်မလိုလားအပ်သော) ၏အထူးအခြေအနေများတွင်အထူးသဖြင့်တုန့်ပြန် dictate ပေးသောအလေ့အထ, ကကမကထပြုခဲ့ရနိုင် ရလဒ်ကို၏။ လုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားများယခု OFC အပါအဝင်တိုက်နယ်မျှော်မှန်းရလဒ် 36 ၏တန်ဖိုး၏တက်ကြွသောကိုယ်စားပြုမှုအပေါ်အခြေခံပြီးအပြုအမူမြှင့်တင်ဘို့အထူးအရေးပါကြောင်းကိုပြသသည်။ ဒီ function ခန့်မှန်းရလဒ် 37-39 ကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာလျှင်မြန်စွာတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိဖို့တိရစ္ဆာန်များ၏စွမ်းရည်အတွက်ထငျရှားပါသညျ။ ကြွက်များနှင့်မျောက်များအတွက်, ဒီစွမ်းရည်ကိုမကြာခဏဆုလာဘ်တစ်ခု cue ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ကို non-ဆုလာဘ် (သို့မဟုတ်ပြစ်ဒဏ်) ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်လာရသောမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်လေ့လာသင်ယူတာဝန်များကိုအတွက်အကဲဖြတ်နှင့် Non-ဆုလာဘ် (သို့မဟုတ်ပြစ်ဒဏ်) ၏ cue ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဆုလာဘ်၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်လာသည်။ imaging လေ့လာမှုများလူသားမြားသ 40-42 အတွက်သင်ယူမှုမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်အတွက် OFC ဆက်စပ်. အများနှင့် OFC ပျက်စီးမှုနှင့်အတူကြွက်များနှင့်မျောက်ဝံများမူရင်းပစ္စည်းများများအတွက်သင်ယူနဂိုအတိုင်း 38 ဖြစ်ပါတယ်အချိန်မှာတောင်သင်ယူမှုပြောင်းပြန်မှာချို့ယွင်းလျက်ရှိကြ၏ 43-51 ။ ဤသည်လိုငွေပြမှုပုံ 1A အတွက်ကြွက်များတွင်သရုပ်ဖော်နေသည်။ OFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နဂိုအတိုင်းဘာသာရပ်များ၎င်းတို့၏ကနဦးမြင့်မားတန်ဖိုးကိုခန့်မှန်းထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာဆုံးရှုံးမှု 31 ၏မြင့်မားသောအန္တရာယ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့လာမယ့် cue များအတွက်တုံ့ပြန်ပြောင်းပေးဖို့သင်ယူရသော '' လောင်းကစားဝိုင်း '' တာဝန်များကိုအတွက်အလားတူ function ကိုနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်လက်ရှိသိမြင်မှုမှ neuroscience အတွက်အငြင်းပွားဖွယ်ရာခေါင်းစဉ်ဖြစ်သော်လည်းအဆိုပါလောင်းကစားဝိုင်းတာဝန်အတွက် OFC ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကြီးအကျယ်မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ကြောင်းသင်ယူခြင်းများအတွက်လိုအပ်ချက်ကတာဝန်ယူကြောင်းသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်အများဆုံးလောင်းကစားဝိုင်းတာဝန်များကို 51 ၏ဒီဇိုင်းမှာမွေးရာပါဖြစ်ပါတယ်။
ကိုကင်းထိတွေ့ OFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အားဖြင့်သွေးဆောင်လိုငွေပြမှုသင်ယူခြင်းဆင်တူပြင်းအား၏ဖြစ်ကြောင်းလိုငွေပြမှုသင်ယူခြင်း OFC-မှီခိုမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန် induces
ခန့်မှန်းရလဒ်၏တန်ဖိုးကိုယ်စားပြုအတွက် OFC များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုရလဒ်ကို၏တန်ဖိုးတိုက်ရိုက်နာမကျန်းသို့မဟုတ်ရွေးချယ် satiation 52 နှင့်အတူတွဲဖက်မှုကနေတဆင့်ကြိုးကိုင်ထားတဲ့အတွက်စစ်ကူတန်ဖိုးတာဝန်များကိုအတွက်အထီးကျန်နိုင်ပါသည်။ အဲဒီ settings မှာတော့သာမန်တိရစ္ဆာန်များအတွက်ခန့်မှန်းရလဒ်များ၏တန်ဖိုးပြီးနောက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုအဘို့လျော့နည်းတုံ့ပြန်မည်။ အဆိုပါ OFC ပျက်စီးမှုနှင့်အတူကြွက်များနှင့် Non-လူ့မျောက်ဝံများရလဒ်ကိုတန်ဖိုး 37 ၏ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသရန်ပျက်ကွက်; 38; 53 ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကအထူးသဖြင့် Conditions တွေကိုတုန့်ပြန်, သူတို့ရဲ့အပြုအမူကိုလမ်းညွှန်ဖို့ရလဒ်ကိုရဲ့လက်ရှိတန်ဖိုးကတစ်ကိုယ်စားပြုမှုအသုံးချမှ OFC-lesioned တိရိစ္ဆာန်များ၏စွမ်းရည်ကိုတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်လိုငွေပြမှုထုတ်ဖေါ်။ ရလဒ်အဖြစ်အဆိုပါတွေကိုအားဖြင့် evoked အပြုအမူမျှော်မှန်းရလဒ်နှင့်, default အနေဖြင့်ပိုမိုအလေ့အထကဲ့သို့၏တန်ဖိုးအပေါ်အခြေခံလျော့နည်းဖြစ်လာသည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များ၌ပြစ်မှားမိခဲ့ကြသော်လည်း, ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ OFC အတွက် cue-evoked BOLD တုံ့ပြန်မှုကိုသူတို့ predic သည့်အစားအစာများကိုများစွာတန်ဖိုးမှအလွန်အမင်းထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းပြသကြt ကို 54 ။ အောက်တွင်ကျနော်တို့မူးယစ်ထိတွေ့မှုအကြိမ်ကြိမ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထား OFC အတွက် function ကို၏အာရုံခံခြင်းနှင့်မော်လီကျူးအမှတ်အသားများမြားတှငျပွောငျးလဲ induces ဆွေးနွေးရန်; ဤပြောင်းလဲဖွယ်ရှိမူးယစ်ဆေး-အတွေ့အကြုံရှိဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် OFC-mediated အပြုအမူတွေအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာချို့ယွင်းဖျန်ဖြေ။ ထိုသို့သောအပြောင်းအလဲများလည်းစွဲနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-အတွေ့အကြုံရှိတိရစ္ဆာန်များ၏အမူအကျင့်ထဲမှာထင်ရှားသည့်အလေ့အထကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုပုံစံများရန်, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာသူတို့ရဲ့အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ပေးဖို့စွဲ၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဖျန်ဖြေသောအရာကိုဦးနှောက်ဒေသများနှင့်ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ပွင့်လင်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤမေးခွန်းကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာဦးနှောက်ဒေသများသို့မဟုတ်ဆားကစ်အထူးအပေါ်မူတည်သည့်သာမန်အပြုအမူ, မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုကြောင့်ထိခိုက်နေကြခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်နှင့်သက်ဆိုင်ရာတိရစ္ဆာန်အမော်ဒယ်အတွက်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူနှင့်အတူပုံမှန်သင်ယူမှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုပြန်ပြောပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးရှာထိန်းချုပ်၏ဆုံးရှုံးမှုကိုအထူးသဖြင့်ဦးနှောက်ကိုဆားကစ်အတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများကိုထင်ဟပ်လျှင်, ဤပြောင်းလဲများ၏သက်ရောက်မှုသူတို့အားဆားကစ်ပေါ်မှာမူတည်ကြောင်းအပြုအမူတွေအတွက်ထင်ရှားဖြစ်သင့်သည်။ ဤကိစ်စတှငျမူးယစ်ဆေးထိတွေ့ prefrontal ဒေသများ, amygdala နှင့်ကြွက်များ 55-58 အတွက် striatum ကကမကထပြုခဲ့အတော်ကြာသင်ယူအပြုအမူတွေကိုထိခိုက်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုလည်းအာရုံခံမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်ဤဦးနှောက်ဒေသများ 59 အတွက်သတင်းအချက်အလက်သင်ယူဘယ်လိုပွောငျးလဲ; 60 ။ ဒီလေ့လာမှုတွေများထဲတွင်ကြောင့်ကိုကင်းထိတွေ့ခြင်းဟာ OFC အပေါ်မူတည်ကြောင်းရလဒ်ကို-guided အပြုအမူ disrupts အထောက်အထားယခုလည်းမရှိ။ ဥပမာအားဖြင့်, ယခင်က 14 ရက်ပေါင်း (30 mg / kg / နေ့, ip) အတွက်ကိုကင်းထိတွေ့ကြွက်ဆုတ်ခွာ 1 ပြီးနောက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 57 လစစ်ကူတန်ဖိုးပြီးနောက်တုံ့ပြန်အေးစက်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ဆုလာဘ်အရွယ်အစားနှင့်ဆုချဖို့အချိန်လပေါင်းများစွာဆုတ်ခွာ 61 ပြီးနောက်ရွေးချယ်မှုတာဝန်များကိုအတွက်ကြိုးကိုင်သောအခါကင်း-အတွေ့အကြုံရှိကြွက်လည်း Impulse ကိုတုံ့ပြန်; 62 ။ ဤရွေ့ကားလိုငွေပြမှု OFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည် 37 ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သူတို့အားဆင်တူ; 63 ။
ပြောင်းပြန်သင်ယူမှုလည်းကင်းထိတွေ့ပြီးနောက်ချို့ယွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤပထမ 64 နေ့ရက်ကာလအဘို့ကိုကင်းမှနာတာရှည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းထိတွေ့မှု (14 သို့မဟုတ်2mg / kg / နေ့, ip) ပေးထားမျောက်တွေကို Jentsch နှင့်တေလာ4အားဖြင့်ပြသခဲ့ပါသည်။ ဤရွေ့ကားမျောက်များကိုကင်းကနေဆုတ်ခွာပြီးနောက်9နှင့် 30 ရက်ပေါင်းစမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအရာဝတ္ထုမခွဲခြား၏ပြောင်းပြန်ဆည်းပူးဖို့နှေးကွေးခဲ့သညျ။ အလားတူပင်ကျွန်တော်ကြွက်ယခင်ကကင်းထိတွေ့ကြောင်းတွေ့ပြီ (30 14 နေ့ရက်ကာလအဘို့ / ကီလိုဂရမ် / နေ့ ip mg) ပြပွဲမူးယစ်ဆေး 1 ကနေဆုတ်ခွာပြီးနောက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 65 တစ်လမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်စွမ်းဆောင်ရည်ချို့ယွင်း။ ပုံ 1B အတွက်ရုပ်ပြအဖြစ်, တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်သင်ယူမှု၌ဤလိုငွေပြမှု OFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည် 50 နှင့်အတူကြွက်၏ဆင်တူပြင်းအားရှိ၏ 65; 66 ။
လိုငွေပြမှုသင်ယူခြင်းဤသည်မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်မျှော်မှန်းရလဒ်များသင့်လျော်စွာ 59 အချက် OFC အာရုံခံတစ်ဦးပျက်ကွက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အာရုံခံမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်-သင်ယူခြင်းချို့ယွင်းသရုပ်ပြအထက်အသုံးပြုတဲ့တစျခုနဲ့ဆင်တူတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင် OFC ကနေမှတ်တမ်းတင်ထားသောကြသည် ဟူ. ၎င်း, တစ်ခုချင်းစီကိုနေ့ကြွက်သူတို့ sucrose ရရှိရန်နှင့်ကွီနိုင်ရှောင်ရှားရန်တွေကိုအနံ့မှတုန့်ပြန်ရာတစ်ဝတ္ထုမျှမ-go သွားအနံ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှု, သိလာတယ်။ အစောပိုင်းကတစ်လကျော်ကင်းထိတွေ့ကြွက်များတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ OFC အာရုံခံသည်, sucrose နှင့်ကွီနိုင်ရလဒ်များကိုမှပုံမှန်အားဖြင့်ပစ်ခတ်, ဒါပေမယ့်လေ့လာပြီးနောက် cue-ရွေးချယ်တုံ့ပြန်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ သတင်းအချက်အလက်တုံ့ပြန်မှုကိုလမ်းပြဖို့အသုံးပြုနိုင်သည့်အခါတစ်နည်းမှာကင်း-ကုသကြွက်များတွင်အာရုံခံ, အနံ့နမူနာစဉ်အတွင်းရလဒ်များအချက်ပြခဲ့ပါဘူး။ ဒီ signal ကို၏ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ဆန္ဒရှိကွီနိုင်ရလဒ်ကိုခန့်မှန်းနှင့်ဤဆန္ဒရှိစမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်တုံ့ပြန်မှု latency အတွက်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဆက်နွယ်သော cue ၏နမူနာစဉ်အတွင်းအထူးသဖြင့်သိသာခဲ့ပါတယ်။ ထို့ပြင် cue-ရလဒ်ကိုအသင်းအဖွဲ့များ၏ပယ်ဖျက်ခံရပေါ်၌အမြဲတည်သောမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ချို့ယွင်းနှင့်အတူကင်း-ကုသကြွက်များတွင် OFC အာရုံခံသူတို့ရဲ့ cue-selection reverse မှမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ ဤရလဒ်သည်ကိုကင်း-သွေးဆောင် neuroadaptations အားဖြင့်ဒီ function ကို 14 အပေါ်မူတည်ကြောင်းသပ္ပါယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖြစ်စဉ်များထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တိရစ္ဆာန်များ၏စွမ်းရည်ကိုပြောင်းလဲ, အ OFC ၏ function ကိုအချက်ပြပုံမှန်ရလဒ်ကိုနှောင့်အယှက်သောအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီပါ၏ 67 ။ ဤရလဒ်သည်လည်းစွဲလေ့လာပုံမှန်မဟုတ်သော OFC function ကိုဖွယ်ရှိထက်သို့မဟုတ် pre-တည်ဆဲ OFC ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပြင်မူးယစ်သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများကိုထင်ဟပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ဒေသများမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုကြောင့်ထိခိုက်နေကြတယ်ဆိုတာကိုအခြမှတွေ့ရှိရပါသည်လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကို အသုံးပြု. အတွက်သိသိသာသာဘေးရှိပါသည်။ မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှင်းလင်းစွာတစ်ဦးကိုတွေ့ရှိရပါသည်ညီမျှမဟုတ်နှင့်အခြားအဆောက်အဦများအတွက် distal သက်ရောက်မှုကိုကောင်းစွာတွေ့ရှိရပါသည်၏သက်ရောက်မှုတုနိုင်ဘူး။ သို့သျောလညျးဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အလုပ် psychostimulant ထိတွေ့ခြင်းဟာ OFC အတွက် function ကို၏အမှတ်အသားများပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေတတ်ကြောင်းပြသသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Self-စီမံခန့်ခွဲစိတ်ကြွဆေးမှလေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက်ကြာရှည်ပြ OFC dendritic သိပ်သည်းဆ 68 အတွက်လျော့နည်းစေပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှု 68 နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာအပြင်, စိတ်ကြွဆေး-အတွေ့အကြုံရှိကြွက်များဆာပလေ့ကျင့်ရေးပြီးနောက် OFC ၎င်းတို့၏ dendritic နယ်ပယ်များတွင်လျော့နည်း plasticity ပြ။ အထူးသ, ဤရလာဒ်များ psychostimulant ထိတွေ့မှုပုံမှန်အားဖွယ်ရှိတိုးမြှင့်အာရုံခံ plasticity 69-71 ထင်ဟပ် dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆကိုတိုးပွားစေရာ prefrontal cortex ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင်လေ့လာခဲ့ကြကြောင်းအများဆုံးကိုအခြားဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်တွေ့ရှိချက်မှမတူဘဲရပ်တယ်။ သို့မဟုတ်အသစ်သတင်းအချက်အလက်ဝှက်နိုင်စွမ်း - - psychostimulants မှထိတွေ့မှု၏ရလဒ်အဖြစ်ထိုရလဒ်များ plasticity အတွက်တည်မြဲကျဆင်းမှုထားပါတယ်တဲ့ဧရိယာအဖြစ် OFC သတ်မှတ်။ ဤတသမတ်တည်း, ကိုကင်းစွဲပြပွဲဟာ OFC 72 အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအာရုံစူးစိုက်မှုလျော့နည်းသွားသည်။
လူ့အခွအေနေမှအထက်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အမူအကျင့်လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကို၏ဆက်စပ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းစဉ်းစားရန်အကြိမ်ကြိမ်ကိစ္စများရှိပါသည်။ တဦးတည်းကိစ္စအထက်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်လေ့လာမှုများအပေါငျးတို့သထဲမှာမူးယစ်ဆေး psychomotor ာင်း 73 တည်မြဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းထိတွေ့ regimen သုံးပြီး Non-ဆက်ပြောပါတယ်ပေးထားခဲ့၏, 74 ။ အများအပြားကလေ့လာမှုများကဆက်ပြောပါတယ်နှင့်ဦးနှောက် function ကိုနှင့်အပြုအမူ 75-78 အပေါ် Non-ဆက်ပြောပါတယ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အရေးကြီးသောကွဲပြားခြားနားမှုကိုပြသကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, psychomotor ာင်းဖြစ်စေနာတာရှည်ကိုကင်းစွဲဒါမှမဟုတ်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး 79 ၏ကျယ်ပြန့်သမိုင်းနှင့်အတူမျောက်တွေကိုထင်ရှားကြောင်းအနည်းငယ်သာသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ ထို့ကွောငျ့တည်ထောင်ရန်ရန်အရေးကြီးပါသည် OFC-မှီခိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွက်လိုငွေပြမှုလေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းအောက်ပါ Non-ဆက်ပြောပါတယ်ကင်းထိတွေ့ regimen လည်းဆက်ပြောပါတယ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု (ဆိုလိုသည်မှာ, မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး) ထည့်သွင်းကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲမော်ဒယ်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကြွက် 14 ဇ / ဃ (3 / ကီလိုဂရမ် / ပြုတ်ရည် mg) အတွက် 0.75 ဃများအတွက် Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားကြောင်းမကြာသေးမီကဖော်ပြခဲ့သည်ထားသောမူးယစ်ဆေး 80 ကနေဆုတ်ခွာပြီးနောက်သုံးလအထိလိုငွေပြမှုသင်ယူနေတဲ့လေးနက်တဲ့မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ပုံ 1C အတွက်ရုပ်ပြအဖြစ်, ဒီမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်လိုငွေပြမှုသည် non-ဆက်ပြောပါတယ်ကင်းထိတွေ့ 65 ပြီးနောက်သို့မဟုတ် OFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည် 50 ပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိဖို့ပြင်းအားအလားတူဖြစ်ခဲ့သည်။
စဉ်းစားရန်နောက်ထပ်ပြဿနာကဤလေ့လာမှုအားလုံးအတွက်, OFC လိုငွေပြမှုအချိန်အချို့ကိုကာလအတွက် abstinent ခဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်သရုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ် OFC function ကိုအပေါ်မူးယစ်ဆေး-ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု၏အချိန်သင်တန်းနှင့်ကြာချိန်အကြီးအကျယ်မသိနိုင်ပါဘူး။ တဦးတည်းခြွင်းချက်သူတို့အနေနဲ့ OFC-မှီခိုအနံ့-guided Win-ပြောင်းကုန်ပြီတာဝန် 81 အပေါ်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကင်းထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ရသော Kantak နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ 82 ကလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစာရေးဆရာများသည်ဤတာဝန်အတွက်အမူအကျင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအစည်းအဝေးများအပြီးချက်ချင်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြကြောင်းကြွက်များတွင်ဆက်ပြောပါတယ်သော်လည်းမ Non-ဆက်ပြောပါတယ်ကိုကင်းများကအာရုံချို့ယွင်းခဲ့သည်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤရလဒ်ကင်းထိတွေ့ OFC-မှီခိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတခုတခုအပေါ်မှာချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုပြသသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာအထက်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အစီရင်ခံစာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤလေ့လာမှုမှာ OFC-mediated အပြုအမူတွေအပေါ်ကို non-ဆက်ပြောပါတယ်ကင်းထိတွေ့မှု၏ပျက်ကွက် OFC function ကိုအပေါ်မူးယစ်ဆေး-ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမူးယစ်ဆေးကနေဆုတ်ခွာပြီးနောက်တိုးမြှင့်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။
နိဂုံးချုပ်, ကိုကင်းထိတွေ့မှုမှာတော့ (ကဆက်ပြောပါတယ်သို့မဟုတ် Non-ဆက်ပြောပါတယ်ဖြစ်စေ) OFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိသူတို့အားပြင်းအားအလားတူဖြစ်ကြောင်း OFC-မှီခိုအပြုအမူတွေအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်တံ့လိုငွေပြမှုစေပါတယ်။ non-ဆက်ပြောပါတယ်ကင်းထိတွေ့မှုလည်းဖြစ်နိုင်ဖွယ်ထင်ဟပ် OFC အာရုံခံအတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပြောင်းလဲပို့ဆောင်သည့် OFC တွင်ဤအာရုံခံအတွက် plasticity အဖြစ်ပုံမှန်မဟုတ်သောအာရုံခံ encoding ကလျော့နည်းသွားသည်။ Next ကိုကျနော်တို့မူးယစ် Self-အုပ်ချုပ်ရေး 83 နှင့် reinstatement 84 မော်ဒယ်များအတွက်တိုင်းတာအဖြစ်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များနှင့် relapse အတွက် OFC ၏အခန်းကဏ္ဍကို, လေ့လာကြပြီလေ့လာမှုများကနေရလဒ်တွေကိုဖော်ပြရန်။
မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် relapse အတွက် OFC ၏အခန်းက္ပ
အထက်ပြန်လည်သုံးသပ်အဆိုပါဒေတာ OFC function ကိုအထပ်ထပ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုအားဖြင့်ပြောင်းလဲကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤအ data ကိုမှဆင်းသက်လာတစ်ဦးကမေးခှနျးကို OFC တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်မူးယစ်ဆေး-ယူပြီးအပြုအမူဖြန်ဖြေအတွက်ကစားသောအရာကိုအခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အနည်းငယ်စာတမ်းများကိုတိုက်ရိုက်ဤမေးခွန်းကိုအကဲဖြတ်ပါပြီ။ အစောပိုင်းလေ့လာမှု၌, Phillips က et al ။ 85 အဆိုပါ OFC သို့လေးမျောက်တွေကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစိတ်ကြွဆေး (10-6 မီတာ) ကဖော်ပြခဲ့သည်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, တူညီတဲ့မျောက်သည်နျူကလိယ accumbens သို့ကြွက်များ 86 အတွက်စိတ်ကြွဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လူသိများဧရိယာ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစိတ်ကြွဆေးမဟုတ်ပြုလေ၏။ Hutcheson နှင့် Everitt 87 နှင့် Fuchs et al ။ 88 neurotoxic OFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကြွက်တစ်ဦး fixed-အချိုး-1 အားဖြည့်အချိန်ဇယားအောက်တွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ဝယ်ယူအယှက်မပြုခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ Hutcheson နှင့် Everitt 87 လည်း OFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းဘို့ဆေးထိုး-တုံ့ပြန်မှုကွေး (0.01 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် 1.5 မှ) မသက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသုံးပြုသောမူးယစ်ဆေးအတွက်ခြားနားချက်များနှင့်အုပ်ချုပ်ရေး၏လမ်းကြောင်းများနှင့် OFC ခန္ဓာဗေဒ 89 အတွက်အလားအလာမျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုများ၏ကြွက်နှင့်မျောက်လေ့လာမှုများနှိုင်းယှဉ်ဖို့ခက်ခဲလှပေမဲ့ကြွက်လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များ OFC မိမိကိုယ်ကို၏အကြိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အရေးပါမဟုတ်ကြောင်းအကြံပြု သွေးကြောသွင်းကင်း -administered ။ ဤသည်လေ့လာရေး OFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပုံမှန်အားဖြင့် setting များ 37 အမျိုးမျိုးအတွက် Non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များအတွက်တုံ့ပြန်ရန်သင်ယူခြင်းအပေါ်မျှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုပြသပေးသောသာမန်သင်ယူမှုလေ့လာမှုများအတွက်ရလဒ်တွေကို, အလားတူဖြစ်၏ 50; 90 ။
ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, Hutcheson နှင့် Everitt 87 အားဖြည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 91 တစ်စက္ကန့်ယူမှုကိုအချိန်ဇယားကိုတိုင်းတာအဖြစ် OFC, ကိုကင်း-ဆက်စပ်တွေကိုအခြေအနေများကိုအားဖြည့်သက်ရောက်မှုများအတွက်လိုအပ်ခဲ့ကွောငျးတှေ့လြှငျ, 92 ။ သူတို့ဟာ neurotoxic OFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်တုံ့ပြန်ဆာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကတော့ကိုကင်း Pavlovian တွေကိုစွမ်းရည်ချို့ယွင်းကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အလားတူပင် Fuchs et al ။ 88 တစ် discrete cue-သွေးဆောင် reinstatement လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်တိုင်းတာအဖြစ်ဂိဗာမွို့ + GABAb agonists (+ baclofen muscimol) ၏အရောအနှောအတူ (medial ပေမယ့်မဟုတ်) နှစ်ဦးနှစ်ဖက် OFC ၏ Reversible လုပ် inactivation, ကိုကင်းတွေကိုအခြေအနေများကိုအားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများချို့ယွင်းသော။ အစီရင်ခံတင်ပြ cue-သွေးဆောင်ကင်းရှာထဲမှာ OFC ရဲ့အခန်းကဏ္ဍများအတွက်အပိုဆောင်းအလားအလာသက်သေအထောက်အထားယခင်ကကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူတွဲတွေကိုထိတွေ့ဤဒေသတွင် 268 အတွက်ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇ Zif93 (အာရုံခံ activation တစ်အမှတ်အသား) ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတိုးပွါးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အတူတူကဤအချက်အလက်များကို OFC မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူလှုံ့ဆျောမူးယစ်ဆက်စပ်တွေကိုသီးခြားစွမ်းရည်ကိုဖြန်ဖြေအတွက်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကဖော်ပြသည်။ ထိုသို့သောအခန်းကဏ္ဍ cue-ရလဒ်ကိုအသင်းအဖွဲ့များ 37 များ၏ဝယ်ယူနှင့်အသုံးပြုမှုအတွက် OFC ရဲ့ယခင်ကဖော်ပြထားအခန်းကဏ္ဍရောင်ပြန်ဟပ်မည် 38; 53 ။ အမှန်စင်စစ် OFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည် Non-မူးယစ်ဆေး setting များကို 94-96 အခြေအနေများအားဖြည့်များအတွက်တုံ့ပြန်ချို့ယွင်းခြင်းနှင့်လည်းမကြာသေးမီက OFC တုံ့ပြန်ဆာပလမ်းပြ Pavlovian တွေကိုနိုင်စွမ်းကိုပံ့ပိုးသောညွှန်ပြ, Pavlovian-to-ဆာလွှဲပြောင်း 90 ထိခိုက်စေသတင်းပို့ခဲ့ကြသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာ Fuchs et al ။ သူတို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်၏တွေ့ရှိရပါသည်ဖန်ဆင်းသို့မဟုတ်ကြိုတင်လေ့ကျင့်ရေးမှ OFC medial သည့်အခါ 88 ရလဒ်များကိုတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့ပုံစံကဖော်ပြခဲ့သည်။ သူတို့ကဤသူကို pre-လေ့ကျင့်ရေးကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကင်းရှာ၏ cue-သွေးဆောင် reinstatement မသက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကြိုတင် Self-အုပ်ချုပ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးမှဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသည်သောကြောင့်, OFC အဆိုပါ cue-ကင်းအသင်းအဖွဲ့များ၏ဝယ်ယူတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ကိုမရရှိနိုင်ခဲ့။ ရလဒ်အဖြစ်အဆိုပါ lesioned ကြွက် 97 ရှာကြံ cue-သွေးဆောင်ကင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်အခြားဦးနှောက်ဧရိယာများပိုမိုအားကိုးဖို့သင်ယူကြပေမည်။
နောက်ဆုံးတွင် OFC လည်းမူးယစ်ဆေး-ရှာ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement များအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ပေါ်လာသည်။ တစ်ဦး reinstatement လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 10 သုံးပြီးယခင်လေ့လာမှုများ; 98 ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း footshock စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်မူးယစ်ဆေး-အားဖြည့်တုံ့ပြန် 99 ၏နောက်ဆက်တွဲသုဉ်းဘို့လေ့ကျင့်ရေးအပြီးတွင်ရှာကြံမူးယစ်ဆေး reinstates ကြောင်းပြသကြပြီ 100 ။ မကြာသေးမီက Capriles et al ။ 101 ကင်း priming ထိုးခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement နှင့် reinstatement အတွက် OFC ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနှိုင်းယှဉ်။ သူတို့ဟာ tetrodotoxin အတူ OFC ၏ Reversible လုပ် inactivation ကင်းရှာ၏ကင်း-သွေးဆောင် reinstatement stress- footshock သော်လည်းမယုတ်လျော့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကအစ D1 တူသောအဲဒီ receptor ရန် SCH 23390 ပေမယ့်မ D2 တူသောအဲဒီ receptor ရန် raclopride ၏ထိုးသည့် OFC စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ပိတ်ဆို့သို့ဖော်ပြခဲ့သည်။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့အထက်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ကန့်သတ်စာပေဟာ OFC ဖွယ်ရှိကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းများ၏စူးရှသောအကြိုးသက်ရောက်မှုဖျန်ဖြေပေမယ့်မူးယစ်ဆေးရှာမြှင့်တင်ရန်ကင်းတွေကိုနှင့်ဖိအားများ၏စွမ်းရည်အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါတယ်တော်မမူကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် OFC အတွက် D1 ကဲ့သို့ dopamine receptors ကင်းရှာဖို့စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။
Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် reinstatement လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များနှင့် relapse အတွက် OFC တစ်ရှုပ်ထွေးအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒီ Pre-လက်တွေ့လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အများအပြားစမ်းသဘောကောက်ချက်ဆွဲလိမ့်မယ်။ ပထမဦးစွာ OFC ကင်း၏စူးရှသောအကြိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ဒါမှမဟုတ်မူးယစ်ဆေးမှစူးရှသောထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင် relapse အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပေါ်လာပါဘူး။ ဤရလဒ်တိရိစ္ဆာန်များယူဆရကြောင့်မျိုးစုံ, အပြိုင်သင်ယူမှုစနစ်များ 37 ၏စစ်ဆင်ရေးရန်, အကျိုးသည်တုံ့ပြန်ရန်သင်ယူဖို့အတှကျ OFC ခဲလိုအပ်သောကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီမူကား, 50; 90 ။
ဒုတိယ, OFC ကင်းရှာနှိုးဆော်ခြင်းငှါမူးယစ်ဆက်စပ်တွေကိုနိုင်စွမ်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပေါ်လာပါဘူး။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်မူးယစ်ဆက်စပ်တွေကို 15 အားဖြင့် OFC ၏အားကြီးသော activation သရုပ်ပြပုံရိပ်လေ့လာမှုများကနေရလဒ်တွေကိုအတူသဘောတူညီချက်၌ရှိကြ၏။ ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ဒါမှမဟုတ် OFC ၏ Reversible လုပ် inactivation ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သာမန်အားဖြင့်မူးယစ်ဆေး 36 ၏မျှော်မှန်းတန်ဖိုးထက်နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ကိုသက်ဝင်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း, cue-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးရှာလျော့ကျစေနိုင်သည်။ အနာဂတ်သုတေသနတစ်ခုမှာမေးခွန်းတစ်ခုကို OFC နှင့် OFC ဆုတ်ခွာ 102-104 ရှာ cue-သွေးဆောင်ကင်းအတွက်အချိန်-မှီခိုတိုးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ရှိမရှိမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကို၏အချိန်-သင်တန်းဖြစ်ပါသည်, တစ်ဦးဖြစ်ရပ်ဆန်းတဏှာ၏ပေါက်ဖွားချေါ။
တတိယ, OFC လည်းကင်းရှာ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement များအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဒါဟာကင်းရှာ၏ reinstatement အပေါ် footshock စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတခု discrete သေံ-အလင်း cue 105 ၏ရှေ့မှောက်တွင်အပေါ်မှီခိုကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ဖြန်ဖြေအတွက် OFC ၏အခန်းကဏ္ဍကို cue-controlled တုံ့ပြန်ပေါ်တွင်စိတ်ဖိစီးမှုကိုထိန်းသိမ်းရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှအလယ်တန်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဒါဟာမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် relapse အတွက် OFC ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကောက်ချက်အလွန်ကန့်သတ် data တွေကိုပေးထားအတန်ငယ်မှန်းဆဖြစ်ကြောင်းအလေးပေးဖို့အရေးကြီးပါသည်။ စဉ်းစားရန်တစ်ခုမှာပြဿနာမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူတွေဖို့ OFC များ၏အလှူငွေမူးယစ်ဆေးမှယခင်ထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပွားသည့် OFC ပြောင်းလဲမှုများရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏သမိုင်းနှင့်အတူကြွက်များတွင်တွေကိုသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုများကသွေးဆောင်အပေါ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ဒါမှမဟုတ် OFC ၏အခြား pharmacological ထိန်းသိမ်းရေးများ၏သက်ရောက်မှုများအနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွသတိနဲ့ပြုမိရမည်ဖြစ်သည်။
စဉ်းစားရန်တစ်ဦးကစက္ကန့်နှင့်ဖြစ်ကောင်းပိုပြီးအခြေခံပြဿနာမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် relapse ၏လက်ရှိတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကတော့ OFC လူ့မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်ကစားသောအရာကိုအခန်းကဏ္ဍအကဲဖြတ်များအတွက်သင့်လျော်သောမကျမည်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်ကို-guided အပြုအမူတွေကိုဖြန်ဖြေအတွက်၎င်း၏ယေဘုယျအခန်းကဏ္ဍမှထို့အပြင် OFC အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များ 38 ပြောင်းလဲမှုများတုံ့ပြန်ရန်အထူးအရေးကြီးသောဖြစ်ဟန်; 43; 50 ။ သူတို့နှောင့်နှေးသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာ 37 ဖြစ်လာသည့်အခါရလဒ်ကောင်းသောထံမှမကောင်းတဲ့ပြောင်းသို့မဟုတ်တဲ့အခါဒီအထူးသဖြင့်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏ 50; 63; 106-108 ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ maladaptive နှင့်ထကြွလွယ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချ 57 မှဦးဆောင်သည် OFC ၏ဤအထူးသဖြင့် function ကိုစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှုအားဖြင့်နှောင့်အယှက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားပြန်လည်သုံးသပ်ကြပြီ 58; 61; 62; 64; 65; 80 ။ လူသားများတွင်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူဖွယ်ရှိမူးယစ်ဆေးများအတွက်ခဏအလိုဆန္ဒနှင့်အ 109-111 ရှာကြံမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ပုံမှန်အားဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာများနှင့်မကြာခဏနှောင့်နှေးအကျိုးဆက်များ၏အကဲဖြတ်အကြားချိန်ခွင်လျှာများ၏အကျိုးဆက်အား OFC များ၏စွမ်းရည်အပေါ်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများကြောင်းပေးထား မှန်ကန်စွာနှောင့်နှေး signal သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာရလဒ်များရေတိုရေရှည်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း၏ချက်ချင်းဆန္ဒပြည့်စှနျ့လှတျဖို့စွဲ၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအခြေခံလိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျးဤကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများပုံမှန်အားချက်ချင်းနှောင့်နှေးရလဒ်များအကြားစှဲလမျးသူရဲ့ပဋိပက္ခပုံစံမထားတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် relapse အများစုလက်ရှိမော်ဒယ်အတွက်ထင်ရှားဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
အစောပိုင်းလေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးအားဖြည့် 112 အကဲဖြတ်များအတွက်ပြစ်ဒဏ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများထည့်သွင်းလုပ်ခဲ့တယ်ပေမယ့်; 113 သာမကြာသေးမီကအတော်ကြာစွဲသုတေသီများသည်ဤမော်ဒယ်များမှပြန်လာသောရှိသည်။ ဤရွေ့ကားသုတေသီများပြစ်ဒဏ်သို့မဟုတ်ပုံမှန် drug- ဖိနှိပ်သို့မဟုတ် 114-116 တုံ့ပြန်အစားအစာ-ဆည်းပူးနေမယ်လို့ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များနှင့်အတူရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာမူးယစ်ဆေးထိတွေ့တစ်ခုကျယ်ပြန့်သမိုင်းနှင့်အတူအချို့သောကြွက်မူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေသည့်အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကိုဆက်လက်ဦးမည်ကြောင်းအစီရင်ခံပါပြီ။ Punishment- သို့မဟုတ်ပဋိပက္ခ-based လုပျထုံးလုပျနညျးမြားကိုလညျးမကြာသေးမီက 117 ရှာကြံမူးယစ်ဆေးမှမူးယစ် priming- နှင့် cue-သွေးဆောင် relapse အကဲဖြတ်ရန်မိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကပိုအနီးကပ်လူသိများအပြုအမူအတွက် OFC ၏အခန်းကဏ္ဍအဖြစ်လူ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲ၏အပြုအမူပုံစံကြောင့်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် OFC ၏အခန်းကဏ္ဍကိုခွဲထုတ်ဖို့ပိုကောင်းသင့်လျော်ပေမည်။ ထို့ကြောင့်ပြစ်ဒဏ်သို့မဟုတ်ပဋိပက္ခမော်ဒယ်များအတွက် OFC ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကဲဖြတ်အနာဂတ်သုတေသန၏အရေးပါသောဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုကင်းထိတွေ့ပြီးနောက်လိုငွေပြမှုသင်ယူခြင်းဟာတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်အပေါ်တွေ့ရှိချက်များပေါ်တွင် အခြေခံ. ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. အတွက်ကျနော်တို့ OFC လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ကင်း-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ၏ရှေ့မှောက်တွင်အတွက်တုံ့ပြန်ဖိနှိပ်ဖို့လျော့နည်းသွားစွမ်းရည်နှင့်ဆက်စပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်း။
ကြည့်ရှုရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။ (27K, doc)
ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏အရေးအသားမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု (YS) ရက်နေ့တွင် R01-DA015718 (GS) နှင့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်စတီကျု၏ Intramural သုတေသနအစီအစဉ်ကထောက်ခံခဲ့သည်။
ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ဖော်: DRs ။ Schoenbaum နှင့် Shaham ထုတ်ဖော်ရန်စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိဘဏ္ဍာရေးပဋိပက္ခများကိုရှိသည်။
1 ။ Leshner AI အ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲကုသမှုသုတေသန။ နောက်တစ်နေ့မျိုးဆက်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1997; 54: 691-694 ။ [PubMed]
2 ။ Mendelson JH, Mello NK ။ ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုများ၏စီမံခန့်ခွဲမှု။ N ကို Engl J ကို Med ။ 1996; 334: 965-972 ။ [PubMed]
3 ။ O 'Brien က CP ။ စွဲလမ်းများအတွက်သုတေသန-based pharmacotherapies ၏အကွာအဝေး။ သိပ္ပံ။ 1997; 278: 66-70 ။ [PubMed]
4 ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ စွဲလမ်း၏ Neurobiology ။ Curr Opin Neurobiol ။ 1996; 6: 243-251 ။ [PubMed]
5 ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ ဆုလာဘ်၏ catecholamines သီအိုရီ: တစ်ဦးကဝေဖန်သုံးသပ်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1978; 152: 215-247 ။ [PubMed]
6 ။ ရောဘတ်, DC, Koob gf, Klonoff P ကို, Fibiger HC ။ နျူကလီးယပ် accumbens ၏ 6-hydroxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အောက်ပါကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမျိုးသုဉ်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1980; 12: 781-787 ။ [PubMed]
7 ။ ပီယပ် RC, Kumaresan V. အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်က: အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်နောက်ဆုံးဘုံလမ်းကြောင်း? neuroscience Biobehav ဗျာ 2006; 30: 215-238 ။ [PubMed]
8 ။ Shalev ဦး, Grimm JW, relapse ၏ Shaham Y. Neurobiology ဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်းရှာမှ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ Pharmacol ဗျာ 2002; 54: 1-42 ။ [PubMed]
9 ။ Kalivas PW, Volkow ND ။ စွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောအခြေခံ: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရောဂါဗေဒ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1403-1413 ။ [PubMed]
10 ။ Epstein DH, Preston KL, Stewart က J ကို, Shaham Y. မူးယစ်ဆေး relapse တစ်မော်ဒယ်ခါနီး: အ reinstatement လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏တရားဝင်မှုတစ်ဦးအကဲဖြတ်။ Psychopharmacology ။ 2006; 189: 1-16 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
11 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ စွဲလမ်း။ Annu ဗြာ Psychol ။ 2003; 54: 25-53 ။ [PubMed]
12 ။ Everitt BJ, ME Wolf ။ Psychomotor လှုံ့ဆော်စွဲ: တစ်အာရုံကြောစနစ်များကိုရှုထောင့်။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 3312-3320 ။ [PubMed]
13 ။ Wolffgramm J ကို, Galli, G, Thimm က F, စွဲလမ်း၏ Heyn အေတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ: ကုထုံးမဟာဗျူဟာအဘို့အမော်ဒယ်များ? J ကိုဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Transm ။ 2000; 107: 649-668 ။ [PubMed]
14 ။ Jentsch JD, တေလာ JR ။ ဆုလာဘ်-related လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အမူအကျင့်များထိန်းချုပ်ရေးအတွက်သက်ရောက်မှုတွေ: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် frontostriatal ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေရရှိလာတဲ့ Impulse ။ Psychopharmacology ။ 1999; 146: 373-390 ။ [PubMed]
15 ။ Volkow ND, မုဆိုး JS ။ စွဲလမ်း, မလှူခြင်းနှင့် drive ကိုတစ်ဦးရောဂါ: အ orbitofrontal cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Cereb Cortex ။ 2000; 10: 318-325 ။ [PubMed]
16 ။ Schoenbaum, G, Roesch MR, Stalnaker က TA ။ Orbitofrontal cortex, ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2006; 29: 116-124 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
17 ။ လန်ဒန် ED, Ernst M က, Grant က S နဲ့, Bonson K ကို Weinstein အေ Orbitofrontal cortex နှင့်လူ့မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု: အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2000; 10: 334-342 ။ [PubMed]
18 ။ Porrino LJ, လီယွန်ဃ Orbital နှင့် prefrontal cortex နဲ့ psychostimulant အလွဲသုံးစားမှု medial: တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်လေ့လာမှုများ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2000; 10: 326-333 ။ [PubMed]
19 ။ Micallef J ကို, Blin O. Neurobiology နှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါ၏လက်တွေ့ဆေးဝါးဗေဒ။ Clin Neuropharmacol ။ 2001; 24: 191-207 ။ [PubMed]
20 ။ Saxena က S နဲ့, Brody AL, Schwartz JM, Baxter LR ။ obsessive-compulsive ရောဂါအတွက် Neuroimaging နှင့်တိုကျရိုကျ-subcortical circuitry ။ br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998; (ပျော့ပျောင်း): 26-37 ။ [PubMed]
21 ။ Saxena က S နဲ့, Brody AL, Maidment KM, Dunkin JJ, Colgan M က, Alborzian S က, et al ။ ဒေသခံစံနှုန်းပြုထားသော orbitofrontal နှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါအတွက် paroxetine ကုသမှုကိုတုံ့ပြန်၏ subcortical ဇီဝဖြစ်စဉ်အပြောင်းအလဲများနှင့်ခန့်မှန်း။ Neuropsychopharmacology ။ 1999; 21: 683-693 ။ [PubMed]
22 ။ Rauch SL, Jenike MA, Alpert မိုင်, Baer က L, Breiter HC, ဗေ့ခ်ျ CR, Fischman AJ ။ အောက်စီဂျင် 15-တံဆိပ်ကပ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့များနှင့် positron ထုတ်လွှတ် tomography သုံးပြီး obsessive-compulsive ရောဂါအတွက်လက္ခဏာဒေါသစဉ်အတွင်းတိုင်းတာဒေသဆိုင်ရာနှောက်သွေးစီးဆင်းမှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1994; 51: 62-70 ။ [PubMed]
23 ။ Friedman ငါ Dar R ကို, Shilony အီး compulsive နှင့် opioid စွဲအတွက် obsessionality ။ J ကိုအာရုံကြော Ment dis ။ 2000; 188: 155-162 ။ [PubMed]
24 ။ Crum RM, အန်သိုနီ JC ။ ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါအခြားသံသယအန္တရာယ်အချက်များ: အ epidemiological ရေဝေရေလဲဧရိယာစစ်တမ်းများကနေဒေတာဖြင့်အလားအလာလေ့လာမှု။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1993; 31: 281-295 ။ [PubMed]
25 ။ မမှန်သော-Stewart က W က, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကုသမှုဝင်ရောက်လူနာအကြား Angarano K. obsessive-compulsive ရောဂါ။ ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ရောဂါ၏တိကျမှန်ကန်မှု။ J ကိုအာရုံကြော Ment dis ။ 1994; 182: 715-719 ။ [PubMed]
26 ။ et al Volkow ND, မုဆိုး JS, Wolf ကအေပီ, Hitzemann R ကို, Dewey က S, Bendriem B က။ ကိုကင်းမှီခိုခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာအတွက်ဦးနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်အတွက်အပြောင်းအလဲများ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1991; 148: 621-626 ။ [PubMed]
27 ။ Stapleton JM, မော်ဂန် MJ, Phillips က RL, Wong က DF, Yung ဘီစီ, Shaya ek, et al ။ polysubstance အလွဲသုံးစားမှုများတွင်နှောက်ဂလူးကို့စအသုံးချ။ Neuropsychopharmacology ။ 1995; 13: 21-31 ။ [PubMed]
28 ။ et al Volkow ND, Chang က L ကို, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Ding YS, Sedler M က။ စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများဦးနှောက် dopamine D2 receptors ၏အနိမ့်အဆင့်: အ orbitofrontal cortex အတွက်ဇီဝြဖစ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်း။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 158: 2015-2021 ။ [PubMed]
29 ။ လန်ဒန် ED ရှိမုန် SL, Berman သည် SM, Mandelkern MA, Lichtman လေး, Bramen J ကို, et al ။ ခံစားချက်နှောင့်အယှက်များနှင့်မကြာသေးမီက abstinent စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်ဒေသဆိုင်ရာနှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်မူမမှန်။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှုထဲမှာမော်ကွန်း။ 2004; 61: 73-84 ။ [PubMed]
30 ။ Childress AR, Mozley PD, McElgin W က, Fitzgerald J ကို, Reivich M က, O 'Brien က CP ။ cue-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာစဉ်အတွင်း Limbic activation ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1999; 156: 11-18 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
31 ။ Bechara တစ်ဦးက, Damasio H ကို, Damasio AR, Lee ကမိသားစုဆရာဝန်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လူ့ amygdala နှင့် ventromedial prefrontal cortex ၏ကွဲပြားခြားနားသောပံ့ပိုးမှုများကို။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 1999; 19: 5473-5481 ။ [PubMed]
32 ။ S ကပေးသနား Contoreggi ကို C, လန်ဒန် ED ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများတွင်ချို့ယွင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသပါ။ Neuropsychologia ။ 2000; 38: 1180-1187 ။ [PubMed]
33 ။ Bechara တစ်ဦးက, Dolan S က, Denburg N ကို, သမင်ဒရယ်တစ်ဦးက, Andersen က SW, နေသန် PE ။ အလုပ်မဖြစ်တဲ့ ventromedial prefrontal cortex ဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုငွေပြမှု, အရက်နှင့်လှုံ့ဆော်ချိုးဖောက်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ Neuropsychologia ။ 2001; 39: 376-389 ။ [PubMed]
34 ။ ရော်ဂျာက RD, Everitt BJ, Baldacchino တစ်ဦးက, Blackshaw AJ, Swainson R ကို, Wynn K သည်, et al ။ နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများ, opiate ချိုးဖောက်မှုများ, prefrontal cortex မှ focal ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူလူနာနဲ့ tryptophan-ကုန်ခမ်းပုံမှန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သိမှတ်ခံစားမှုထဲမှာ Dissociable လိုငွေပြမှု: monoaminergic ယန္တရားများအဘို့သက်သေသာဓက။ Neuropsychopharmacology ။ 1999; 20: 322-339 ။ [PubMed]
35 ။ Bolla KI, Eldreth DA, လန်ဒန် ED, Keihl Ka, Mouratidis M က, Contoreggi ကို C, et al ။ တစ်ဦးဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဝန်ဖျော်ဖြေ abstinent ကင်းချိုးဖောက် Orbitofrontal cortex ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ Neuroimage ။ 2003; 19: 1085-1094 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
36 ။ Schoenbaum, G, Roesch MR ။ Orbitofrontal cortex, အသင်းအဖွဲ့များသင်ယူမှုနှင့်မျှော်လင့်ထား။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 47: 633-636 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
37 ။ Gallagher M က, McMahan RW, အသင်းအဖွဲ့များသင်ယူမှုအတွက်မက်လုံးပေးတန်ဖိုး Schoenbaum G. အ Orbitofrontal cortex နဲ့ကိုယ်စားပြုမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 1999; 19: 6610-6614 ။ [PubMed]
38 ။ Izquierdo အေဒီ, Suda RK, Murray EA ၏။ မျောက်တွေကိုအတွက်နှစ်နိုင်ငံ Orbital prefrontal cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးနှင့်ဆုလာဘ်အရေးပေါ်နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်ပဲ့ထိန်းရွေးချယ်မှုနှောင့်အယှက်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2004; 24: 7540-7548 ။ [PubMed]
39 ။ Baxter MG, က Parker တစ်ဦးက, Lindner CCC, Izquierdo အေဒီ, Murray EA ၏။ စစ်ကူတန်ဖိုးကိုခြင်းဖြင့်တုန့်ပြန်ရွေးချယ်ရေး၏ထိန်းချုပ်ရေး amygdala နှင့် orbitofrontal cortex ၏အပြန်အလှန်လိုအပ်သည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2000; 20: 4311-4319 ။ [PubMed]
40 ။ R ကို, Clark က L ကို, Owen လေး, Robbins TW အေး။ အဖြစ်အပျက်-related အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်သုံးပြီးသင်ယူဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်များ၏အာရုံကြောယန္တရားများ defining ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2002; 22: 4563-4567 ။ [PubMed]
41 ။ Hampton AN, Bossaerts P ကို, O'Doherty JP ။ လူသားများတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းစိတ္တဇပြည်နယ်-based အခြအတွက် ventromedial prefrontal cortex ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2006; 26: 8360-8367 ။ [PubMed]
42 ။ မောရစ် JS, Dolan RJ ။ တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်နေစဉ်အတွင်း Dissociable amygdala နှင့် orbitofrontal တုံ့ပြန်မှု။ Neuroimage ။ 2004; 22: 372-380 ။ [PubMed]
43 ။ Chudasama Y ကို, Robbins TW ။ အဆိုပါကြွက်တိုကျရိုကျ cortex ၏အလုပ်လုပ်တဲ့သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောများအတွက်နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထား: pavlovian autoshaping နှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်သင်ယူမှုဖို့ orbitofrontal နှင့် infralimbic cortex ၏ Dissociable ပံ့ပိုးမှုများကို။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2003; 23: 8771-8780 ။ [PubMed]
44 ။ ဘရောင်း VJ, McAlonan K. Orbital prefrontal cortex မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်ကြွက်များတွင်ပြောင်းလဲအာရုံစိုက်မှုမပေးထား mediates ။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2003; 146: 97-130 ။ [PubMed]
45 ။ ကင်မ်ဂျေ, Ragozzino Ke ။ ပြောင်းလဲနေတဲ့တာဝန်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်အောက်မှာသင်ယူခြင်းအတွက် orbitofrontal cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ သင်ယူခြင်းနှင့် Memory ၏ Neurobiology ။ 2005; 83: 125-133 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
46 ။ Clark က L ကို, Cool R ကို, Robbins TW ။ ventral prefrontal cortex ၏ neuropsychology: ဆုံးဖြတ်ချက်-ချမှတ်ခြင်းနှင့်တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်သင်ယူမှု။ ဦးနှောက်နှင့်အသိမှတ်ခံစားမှု။ 2004; 55: 41-53 ။ [PubMed]
47 ။ Hornak J ကို, O'Doherty J ကို, Bramham J ကို, Rolls ET, မောရစ် RG, Bullock PR စနစ်, Polkey အီး။ လူသားတွေအတွက် orbito-တိုကျရိုကျသို့မဟုတျ dorsolateral prefrontal cortex အတွက်ခွဲစိတ်ယစ်မျိုးပြီးနောက်သင်ယူဆုလာဘ်-related မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်။ သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2004; 16: 463-478 ။ [PubMed]
48 ။ LK, Farah MJ Fellows ။ Ventromedial တိုကျရိုကျ cortex လူသားတွေအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေရွေ့ပြောင်း mediates: ပါရာဒိုင်းသင်ယူခြင်းတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ထံမှသက်သေအထောက်အထား။ ဦးနှောက်။ 2003; 126: 1830-1837 ။ [PubMed]
49 ။ Orbital တိုကျရိုကျ၏ Meunier M က, Bachevalier J ကို, Mishkin အမ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အရာဝတ္ထုနှင့် Spatial မှတ်ဉာဏ်အပေါ် anterior cingulate ကိုတွေ့ရှိရပါသည်မျောက်တွေကို၌တည်၏။ Neuropsychologia ။ 1997; 35: 999-1015 ။ [PubMed]
50 ။ Schoenbaum, G, Setlow B, Nugent SL, Saddoris အမတ်, orbitofrontal cortex နဲ့ basolateral amygdala ရှုပ်ထွေးသော၏ Gallagher အမ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အနံ့-guided မခွဲခြားနှင့်ပြောင်းပြန်၏ဝယ်ယူနှောင့်အယှက်။ သင်ယူခြင်းနှင့် Memory ။ 2003; 10: 129-140 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
51 ။ LK, Farah MJ Fellows ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအောက်ပါ ventromedial အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောနောက်ခံချို့ယွင်းခြင်းနှင့်လူသားတွေအတွက်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု dorsolateral ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2005; 15: 58-63 ။ [PubMed]
52 ။ ဟော်လန်ကို PC, Straub JJ ။ Pavlovian စာစားချင်စိတ်ကိုအေးစက်ပြီးနောက်ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု devaluing ၏နည်းလမ်းနှစ်ခု၏သက်ရောက်မှု Differential ။ စမ်းသပ်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်: တိရိစ္ဆာန်အပြုအမူလုပ်ငန်းစဉ်။ 1979; 5: 65-78 ။ [PubMed]
53 ။ Pickens CL, Setlow B, Saddoris အမတ်, Gallagher M က, ဟော်လန်ကို PC, orbitofrontal cortex နှင့်စစ်ကူတန်ဖိုး task ထဲမှာ basolateral amygdala များအတွက် Schoenbaum G. အအမျိုးမျိုးအခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2003; 23: 11078-11084 ။ [PubMed]
54 ။ Gottfried ဂျာ O'Doherty J ကို, Dolan RJ ။ လူ့ amygdala နှင့် orbitofrontal cortex အတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကို Encoding ။ သိပ္ပံ။ 2003; 301: 1104-1107 ။ [PubMed]
55 ။ Wyvell CL, Berridge KC ။ ယခင်စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့မှုအားဖြင့်မက်လုံးပေးာင်း: တိုးမြှင့် cue-ဖြစ်ပေါ် sucrose ဆုလာဘ်အတွက် "လို" ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2001; 21: 7831-7840 ။ [PubMed]
56 ။ ရှိမုနျကိုဘ, Setlow ခ Post ကို-လေ့ကျင့်ရေးစိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေးအစာစားချင်စိတ် Pavlovian အေးစက်အတွက်မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးပိုကောင်းစေပါတယ်: မူးယစ်ဆေးစွဲဘို့ဂယက်ရိုက်။ သင်ယူခြင်းနှင့် Memory ၏ Neurobiology ။ 2006; 86: 305-310 ။ [PubMed]
57 ။ Schoenbaum, G, Setlow ခကင်းသုဉ်းလုပ်ရပ်များရလဒ်များမှအာရုံမခံစားနိုင်သောသော်လည်းမစေသည်: ပြောင်းလဲ orbitofrontal-amygdalar function ကိုအဘို့အဂယက်ရိုက်။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2005; 15: 1162-1169 ။ [PubMed]
58 ။ နယ်လ်ဆင်တစ်ဦးက, Killcross အက်စ်ဖက်တမင်းဆေးပြားထိတွေ့မှုအလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးပိုကောင်းစေပါတယ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2006; 26: 3805-3812 ။ [PubMed]
59 ။ Stalnaker က TA, Roesch MR, ဖရန့် TM, Burke က ka, ဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းကင်း-အတွေ့အကြုံရှိကြွက်များတွင် orbitofrontal အာရုံခံအတွက် Schoenbaum G. အပုံမှန်မဟုတ်သောဝန်ထမ်းတွေရဲ့ encoding က။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2006; 24: 2643-2653 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
60 ။ Homayoun H ကို, ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ကြွဆေးတုံ့ပြန် medial prefrontal နှင့် orbitofrontal cortex အတွက်ဆယ်လူလာအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်၏ Moghaddam ခတိုးတက်မှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2006; 26: 8025-8039 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
61 ။ Roesch MR, Takahashi Y ကို, Gugsa N ကို, Bissonette GB ကို, Schoenbaum G. အနောက်သို့ကင်းထိတွေ့မှုနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်ပြင်းအားနှစ်ဦးစလုံးမှကြွက်များ hypersensitive စေသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2007; 27: 245-250 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
62 ။ ရှိမုနျကိုဘ, Mendez IA, Setlow ခကင်းထိတွေ့မှုထကြွလွယ်သောရွေးချယ်မှုအတွက်ရေရှည်တိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စာနယ်ဇင်းများတွင်အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။
63 ။ Mobini S က, ခန္ဓာကိုယ်က S, Ho MY, Bradshaw CM, Szabadi အီး, Deakin JFW, အန်ဒါဆင်ထားတဲ့ IM ။ နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာအားဖြည့်ဖို့ sensitivity ကိုအပေါ် orbitofrontal cortex ၏တွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology ။ 2002; 160: 290-298 ။ [PubMed]
64 ။ Jentsch JD, Olausson P ကို, de la Garza R ကို, တေလာ JR ။ မျောက်မှထပ်ခါတလဲလဲ, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်တုန့်ပြန်ဇွဲ၏ချို့ယွင်း။ Neuropsychopharmacology ။ 2002; 26: 183-190 ။ [PubMed]
65 ။ Schoenbaum, G, Saddoris အမတ်, Ramus SJ, Shaham Y ကို, Setlow ခကင်း-အတွေ့အကြုံရှိကြွက်များ orbitofrontal cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည်မှအထိခိုက်မခံတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်လိုငွေပြမှုသင်ယူခြင်းပြပွဲ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2004; 19: 1997-2002 ။ [PubMed]
66 ။ Schoenbaum, G, Nugent S က, Saddoris အမတ်, ကြွက်များတွင် Setlow ခ Orbitofrontal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်သော်လည်းမမျှမ-go သွားအနံ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဝယ်ယူအယှက်။ Neuroreport ။ 2002; 13: 885-890 ။ [PubMed]
67 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ စွဲလမ်းမှု၏စိတ်ပညာနှင့် neurobiology: တစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive အမြင်။ စွဲလမ်း။ 2000; 95: S91-S117 ။ [PubMed]
68 ။ Crombag HS, Gorny, G လီ Y ကို, Kolb B, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ အဆိုပါ medial နှင့် Orbital prefrontal cortex အတွက် dendritic ကျောရိုးအပေါ်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့အကြုံ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2004; 15: 341-348 ။ [PubMed]
69 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, နျူကလိယ accumbens နှင့်စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူအတှေ့အကွုံကထုတ်လုပ် prefrontal cortex အာရုံခံအတွက် Kolb ခ Persistent ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြုပြင်မွမ်းမံ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 1997; 17: 8491-8497 ။ [PubMed]
70 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Gorny, G, Mitton အီး, Kolb ခကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့် neocortex အတွက် dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပွောငျးလဲ။ synapses ။ 2001; 39: 257-266 ။ [PubMed]
71 ။ စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ကင်းနှင့်အတူအထပ်ထပ်ကုသမှုအပြီးတွင်နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex အတွက် dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အတွက်ရော်ဘင်ဆင် TE, Kolb ခ ALTER ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 1999; 11: 1598-1604 ။ [PubMed]
72 ။ Franklin TR, Acton PD, Maldjian ဂျာ Grey က JD, Croft JR, Dackis, CA, et al ။ မီးခိုးရောင်ကိစ္စဟာနောက်ကျနေခဲ့သည်, orbitofrontal အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှု, cingulate နှင့်ကိုကင်းလူနာယာယီ cortical လျော့နည်းသွားသည်။ ဟားဗတ်။ 2002; 51: 134-142 ။ [PubMed]
73 ။ Kalivas PW, မော်တာလှုပ်ရှားမှု drug- နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အကဲဆတ်ခြင်း Initiative နှင့်စကားရပ်ထဲမှာ Stewart ကဂျေ Dopamine ဂီယာ။ ဦးနှောက် Res ဗျာ 1991; 16: 223-244 ။ [PubMed]
74 ။ Vanderschuren LJ, Kalivas PW ။ အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်း induction နှင့်စကားရပ်ထဲမှာ dopaminergic နှင့် glutamatergic ဂီယာအတွက် ALTER: preclinical လေ့လာမှုများ၏အရေးပါသောပြန်လည်သုံးသပ်။ Psychopharmacology ။ 2000; 151: 99-120 ။ [PubMed]
75 ။ Dworkin SI, Mirkis S ကိုစမစ် je ။ တုန့်ပြန်-မှီခိုကင်း၏တုံ့ပြန်မှု-လွတ်လပ်သောတင်ဆက်မှုနှိုင်းယှဉ်: မူးယစ်ဆေးဝါး၏သေစေလောက်သက်ရောက်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု။ Psychopharmacology ။ 1995; 117: 262-266 ။ [PubMed]
76 ။ Hemby SE, Co. , C, Kove TR, Smith က je, Dworkin SI ။ တုန့်ပြန်-မှီခိုနှင့်ကြွက်များတွင်တုံ့ပြန်မှု-လွတ်လပ်သောကင်းအုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းနျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine ပြင်းအားအတွက်ကွာခြားချက်များ။ Psychopharmacology ။ 1997; 133: 7-16 ။ [PubMed]
77 ။ Kiyatkin EA ၏, Brown က PL ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအတွင်းအတက်အကျ: ဦးနှောက် thermorecording ပေးသဲလွန်စ။ neuroscience ။ 2003; 116: 525-538 ။ [PubMed]
78 ။ Kalivas PW, Hu XT ။ psychostimulant စွဲအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တားစီး။ neuroscience အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2006; 29: 610-616 ။ [PubMed]
79 ။ Bradberry CW ။ သဘောတူညီချက်ဒေသများ, သဘောထားကွဲလွဲခြင်း, စွဲလမ်းများအတွက်ဂယက်: ကြွက်, မျောက်နှင့်လူသားတွေအတွက် cue သက်ရောက်မှုများကိုကင်းထိခိုက်စေ dopamine ဖျန်ဖြေခြင်း။ Psychopharmacology ။ 2007; 191: 705-717 ။ [PubMed]
80 ။ Calu DJ သမား, Stalnaker က TA, ဖရန့် TM, Singh က T က, Shaham Y ကို, Schoenbaum G. အ Withdrawal ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေကြွက်များတွင်လေ့လာသင်ယူ orbitofrontal-မှီခိုပယ်ဖျက်ခံရထဲမှာကြာရှည်လိုငွေပြမှုထုတ်လုပ်သည်။ သင်ယူခြင်းနှင့် Memory ။ 2007; 14: 325-328 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
81 ။ Kantak KM, Udo T က, Ugalde က F, Luzzo ကို C, Di Pietro N ကို, Eichenbaum HB ။ prefrontal cortex သို့မဟုတ်ကြွက်များတွင်လည်ပတ် hippocampus မှဆက်စပ်သင်ယူအပေါ်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Psychopharmacology ။ 2005; 181: 227-236 ။ [PubMed]
82 ။ DiPietro N ကို, Black ကကိုက်, အစိမ်းရောင်-ယော်ဒန်မြစ် K ကို Eichenbaum HB, Kantak KM ။ ကြွက်များတွင်ကွဲပြား prefrontal cortex ငျဒသေတှငျအလုပျလုပျမှတ်ဉာဏ်ကိုတိုင်းတာရန် complementary တာဝန်များကို။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2004; 118: 1042-1051 ။ [PubMed]
83 ။ Schuster CR, Thompson က T. ကိုယ်ပိုင်များ၏အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်အပြုအမူမှီခို။ Annu ဗြာ Pharmacol ။ 1969; 9: 483-502 ။ [PubMed]
84 ။ Shaham Y ကို, Shalev ဦး, Lu က L ကို, De ကျေး H ကို, Stewart ကဂျေမူးယစ်ဆေး relapse ၏ reinstatement မော်ဒယ်: သမိုင်း, နည်းစနစ်နှင့်အဓိကတွေ့ရှိချက်များ။ Psychopharmacology ။ 2003; 168: 3-20 ။ [PubMed]
85 ။ Phillips က AG က, Mora က F, Rolls ET ။ မျောက်တွေကိုအားဖြင့်စိတ်ကြွဆေး၏ Intracerebral Self-အုပ်ချုပ်မှု။ neuroscience လက်တ။ 1981; 24: 81-86 ။ [PubMed]
86 ။ Ikemoto S က, ပညာရှိ RA ။ အကျိုးသည်ဓာတုခလုတ်ဇုန်၏မြေပုံ။ Neuropharmacology ။ 2004; 47 (ပျော့ပျောင်း 1): 190-201 ။ [PubMed]
87 ။ Hutcheson DM, Everitt BJ ။ ကြွက်များတွင်ရှာကြံ cue-controlled ကိုကင်းများ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ရွေးချယ် orbitofrontal cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2003; 1003: 410-411 ။ [PubMed]
88 ။ Fuchs RA, အီဗန် Ka, က Parker အမတ်, ကြည့်ရှု RE ။ conditional cue-သွေးဆောင်ခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင်ရှာကြံကင်းကင်း-ရစေတယ် reinstatement အတွက် orbitofrontal cortex ငျဒသေ၏ differential ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 6600-6610 ။ [PubMed]
89 ။ Ongur: D, စျေး JL ။ ကြွက်, မျောက်နှင့်လူသား၏ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းနှင့် medial prefrontal cortex အတွင်းကွန်ရက်အဖွဲ့အစည်း။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2000; 10: 206-219 ။ [PubMed]
90 ။ Ostlund SB, Balleine BW ။ Orbitofrontal cortex Pavlovian ပေမယ့်ဆာပမဟုတ်သင်ယူမှုအတွက်ရလဒ် encoding က mediates ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2007; 27: 4819-4825 ။ [PubMed]
91 ။ Schindler CW, Panlilio LV, Goldberg က SR ။ တိရစ္ဆာန်များအတွက်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးဒုတိယအယူမှုကိုအချိန်ဇယား။ Psychopharmacology ။ 2002; 163: 327-344 ။ [PubMed]
92 ။ Everitt BJ, Robbins TW ။ ကြွက်များနှင့်မျောက်များအတွက်မူးယစ်ဆေးအားဖြည့်ဒုတိယယူမှုကိုအချိန်ဇယား: ထိရောက်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူအားဖြည့်များ၏တိုင်းတာခြင်း။ Psychopharmacology ။ 2000; 153: 17-30 ။ [PubMed]
93 ။ သောမတ်စ် KL, အာရိုယိုက M, Everitt BJ ။ တစ်ဦး discrete ကင်း-ဆက်စပ်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုမှထိတွေ့မှုကအောက်ပါသင်ယူမှုနှင့် plasticity-ဆက်စပ်ဗီဇ Zif268 ၏ induction ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2003; 17: 1964-1972 ။ [PubMed]
94 ။ သစ်တော်သီးတစ်ဦးက, ပါကင်ဂျာ Hopewell L ကို, Everitt BJ, Roberts သည် AC အ။ အဆိုပါ orbitofrontal ၏တွေ့ရှိရပါသည်သော်လည်းမ medial prefrontal cortex မျောက်ဝံများအတွက်အေးစက်အားဖြည့်နှောင့်အယှက်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2003; 23: 11189-11201 ။ [PubMed]
95 ။ Burke က ka, Miller က DN, ဖရန့် TM, Schoenbaum G. အ Orbitofrontal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်မျှော်မှန်းရလဒ်တစ်ခုကိုယ်စားပြုမှုကကမကထပြုခဲ့သောအခြေအနေများအားဖြည့်များကိုဖျက်ပယ်။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ စာနယ်ဇင်းများတွင် 2007 ။
96 ။ Cousens GA တ, အာရုံအလယ်တန်းအားဖြည့်နှင့်အတူသင်ယူ olfactory ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအော့တိုတီဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအလွှာဟာ။ အဆိုပါ basolateral amygdaloid ရှုပ်ထွေးပြီး orbitofrontal cortex ၏ဗြဲအလှူငှမြေား။ Integrated ဇီဝနှင့်အပြုအမူသိပ္ပံ။ 2003; 38: 272-294 ။ [PubMed]
97 ။ RE ကိုကြည့်ပါ။ မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူမှ conditional-cue relapse ၏အာရုံကြောအလွှာဟာ။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2002; 71: 517-529 ။ [PubMed]
98 ။ က de ကျေး H ကို, ကိုကင်း-အားဖြည့်သည့်ကြွက်များတွင်တုံ့ပြန်၏ Stewart ကဂျေ Reinstatement ။ Psychopharmacology ။ 1981; 75: 134-143 ။ [PubMed]
99 ။ Shaham Y ကို, Rajabi H ကို, Stewart ကဂျေ Relapse ဘိန်းဖြူ-ရှာကြံ opioid ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအောက်မှာမှ: opioid ရုပ်သိမ်းရေး, ဘိန်းဖြူ Prime နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ J ကို neuroscience ။ 1996; 16: 1957-1963 ။ [PubMed]
100 ။ Shaham Y ကို, Erb S က, ကြွက်များတွင်ရှာကြံဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်းဖို့ Stewart ကဂျေစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 2000; 33: 13-33 ။ [PubMed]
101 ။ Capriles N ကို, Rodaros: D, Sorge RE, Stewart ကဂျေကြွက်များတွင်ရှာကြံကင်း၏ stress- နှင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင် reinstatement အတွက် prefrontal cortex တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ Psychopharmacology ။ 2003; 168: 66-74 ။ [PubMed]
102 ။ Grimm JW, မျှော်လင့်ခြင်း BT, ပညာရှိ RA, ကိုကင်းတဏှာ၏ Shaham Y. ပေါက်ဖွားဆုတ်ခွာပြီးနောက်။ သဘာဝ။ 2001; 412: 141-142 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
103 ။ lu, L, Grimm JW, မျှော်လင့်ခြင်း BT, ကိုကင်းတဏှာ၏ Shaham Y. ပေါက်ဖွားဆုတ်ခွာပြီးနောက်: preclinical အချက်အလက်များ၏သုံးသပ်ချက်။ Neuropharmacology ။ 2004; 47 (ပျော့ပျောင်း 1): 214-226 ။ [PubMed]
104 ။ Neisewander JL, Baker DA, Fuchs RA, Tran-ငုယင် LT, Palmer ကတစ်ဦး, မာရှယ် JF ။ Fos ပရိုတိန်းစကားရပ်နှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်ကြွက်များတွင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 798-805 ။ [PubMed]
105 ။ Shelton ဟာ KL, Beardsley pm တွင်။ ကြွက်များတွင် reinstatement အပေါ်ငွိမျးကင်း-အေးစက်လှုံ့ဆော်မှုနှင့် footshock ၏ interaction ။ int J ကို comp Psychol ။ 2005; 18: 154-166 ။
106 ။ Rudebeck PH သည်, ဝေါ်လ်တန် ME စမိုက်သ် AN, Bannerman DM, Rushworth MF ။ သီးခြားအာရုံကြောလမ်းကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောဆုံးဖြတ်ချက်ကုန်ကျစရိတ်ကို process ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2006; 9: 1161-1168 ။ [PubMed]
107 ။ Winstanley, CA, Theobald DEH, Cardinal RN, Robbins TW ။ ထကြွလွယ်သောရွေးချယ်မှုအတွက် basolateral amygdala နှင့် orbitofrontal cortex ၏အခန်းကဏ္ဍနှိုငျးယှဉျ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2004; 24: 4718-4722 ။ [PubMed]
108 ။ orbitofrontal cortex အတွက်အချိန်လျှော့ဆုလာဘ်၏ Roesch MR, တေလာ AR, Schoenbaum G. အ Encoding တန်ဖိုးကိုကိုယ်စားပြုမှု၏လွတ်လပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006; 51: 509-520 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
109 ။ Katz JL, Higgins ST ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှတဏှာနှင့် relapse ၏ reinstatement မော်ဒယ်များ၏တရားဝင်မှု။ Psychopharmacology ။ 2003; 168: 21-30 ။ [PubMed]
110 ။ Epstein DH, Preston KL ။ အဆိုပါ reinstatement မော်ဒယ်နှင့် relapse ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး: တစ်လက်တွေ့ရှုထောင့်။ Psychopharmacology ။ 2003; 168: 31-41 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
111 ။ Epstein DE, Preston KL, Stewart က J ကို, Shaham Y. မူးယစ်ဆေး relapse တစ်မော်ဒယ်ခါနီး: အ reinstatement လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏တရားဝင်မှုတစ်ဦးအကဲဖြတ်။ Psychopharmacology ။ 2006; 189: 1-16 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
112 ။ Smith ကစင်ကာပူဒေါ်လာ, Davis က WM ။ စိတ်ကြွဆေးနှင့်မော်ဖင်းအကိုက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူ၏ပြစ်ဒဏ်။ Psychol ဖမ်းယူရေး။ 1974; 24: 477-480 ။
113 ။ Johanson အီး။ အဆိုပါမျောက်တွေကိုအတွက်ရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းထဲမှာကိုကင်းဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားတုံ့ပြန်အပေါ်လျှပ်စစ်ရှော့ခ်၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology ။ 1977; 53: 277-282 ။ [PubMed]
114 ။ Deroche-Gamonet V ကို, ဘီးလင်း: D, Piazza PV ။ ကြွက်များတွင်စွဲတူသောအပြုအမူများအတွက်အထောက်အထား။ သိပ္ပံ။ 2004; 305: 1014-1017 ။ [PubMed]
115 ။ Vanderschuren LJ, Everitt BJ ။ မူးယစ်ဆေးရှာအချိန်ကြာမြင့်စွာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောဖြစ်လာသည်။ သိပ္ပံ။ 2004; 305: 1017-1019 ။ [PubMed]
116 ။ Wolffgramm J ကို, ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးဖို့ထိန်းချုပ်ထားမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု မှစ. Heyn အေ: ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1995; 70: 77-94 ။ [PubMed]
117 ။ Panlilio LV, Thorndike eb, Schindler CW ။ ကြွက်များတွင်ပြစ်ဒဏ်-နှိမ်နင်း opioid Self-အုပ်ချုပ်ရေး Reinstatement: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှ relapse တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာမော်ဒယ်။ Psychopharmacology ။ 2003; 168: 229-235 ။ [PubMed]
118 ။ Sinha R ကို, ဖျူး T က, Aubin LR, O'Malley အက်စ်အက်စ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှု, မူးယစ်ဆေးတွေကိုနှင့်ကင်းတပ်မက် -related ။ Psychopharnacology ။ 2000; 152: 140-148 ။ [PubMed]
119 ။ Katzir တစ်ဦးက, ဗာနာ-Ygael N ကို, Levy: D, Shaham Y ကို, cue-သွေးဆောင် relapse ၏ Zangen အေတစ်ဦးကပဋိပက္ခကြွက်မော်ဒယ်ကိုကင်းရှာရန်။ စာနယ်ဇင်းများတွင် Psychopharmacology ။
120 ။ O 'Brien က CP, Childress AR, Mclellan က TA, မူးယစ်ဆေးမှီခိုလူသားတွေအတွက် Ehrman R. နျ Classical အေးစက်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1992; 654: 400-415 ။ [PubMed]
121 ။ Stewart က J ကို, က de ကျေး H ကို, opiates နှင့်စိတ်ကြွဆေး၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ခြွင်းချက်မရှိနှင့်အခြေအနေများကိုမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ၏ Eikelboom R. အခန်းက္ပ။ Psychol ဗျာ 1984; 91: 251-268 ။ [PubMed]
122 ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA, Bozarth MA ။ စွဲလမ်းတစ် psychomotor လှုံ့ဆော်သီအိုရီ။ Psychol ဗျာ 1987; 94: 469-492 ။ [PubMed]
123 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ။ ဦးနှောက် Res ဗျာ 1993; 18: 247-291 ။ [PubMed]
124 ။ de Vries တီဂျေ, Schoffelmeer AN, Binnekade R ကို, Mulder AH, Vanderschuren LJ ။ ရေရှည်သုဉ်းအောက်ပါ heroin- နှင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် reinstatement အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းစကားရပ်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ EUR J ကို neuroscience ။ 1998; 10: 3565-3571 ။ [PubMed]
125 ။ midbrain dopamine အာရုံခံဆဲလျ reactivity ကိုနှင့် psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေး Vezina P. အသိ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2004; 27: 827-839 ။ [PubMed]
126 ။ Shaham Y ကို, မျှော်လင့်ခြင်း BT ။ မူးယစ်ဆေးရှာဖို့ relapse အတွက် neuroadaptations ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 1437-1439 ။ [PubMed]
127 ။ Everitt BJ, Robbins TW ။ မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်အားဖြည့်များ၏အာရုံကြောစနစ်များ: လုပ်ရပ်များကနေအလေ့အထမှမလှူရန်။ နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 1481-1489 ။ [PubMed]